तलब कहिले आउँछ दाइ ? फिचर . राेजगार . समाचार६ जेठ २०७७
कोरोना संक्रमित पत्रकारको अनुभव : थुनुवा कोठामा जस्तै बसेका छौँ 'यहाँ न अस्पतालको वातावरण छ र कुनै बेड नै छ, बस्न पनि अत्यन्तै गाह्रो छ । म मुटुको औषधि खाइरहेको एउटा बिरामी थुनुवा कोठामा जस्तै बसेको छु’, वीरेन्द्रले भने फिचर . समाचार३ जेठ २०७७
स्वाबका खेलाडी कोरोना परीक्षण टिमको नेतृत्व गरिरहेका छन् डा. रञ्जित साहले । २ महिनायता उनको दैनिकी नै फेरिएको छ । बिहानदेखि राती १२-१ बजेसम्म पनि उनी प्रयोगशालाकै ल्याबमा हुन्छन् । पहिलो संक्रमितदेखि चीनबाट उद्धार गरेर ल्याइएका विद्यार्थी, प्रधानमन्त्री, नेता, सांसदसम्मको परीक्षण उनैले गरेका छन् फिचर . स्वास्थ्य३ जेठ २०७७
साहित्यमा रुझेका कुशल बैंकर ‘म त्यहाँ काम गर्दा धेरै गरिबको मुखमा हाँसो पनि दिलाउन पाएँ । हेर्दाहेर्दै उनीहरूको जीवनस्तर उकासिएको पनि देख्न पाइयो । बच्चाबच्ची स्कुलमा पढाउन नसकेकालाई पनि स्कुल पठाउन सफल भइयो । यो सबै कुरा सम्झिँदा रमाइलो अनुभूति हुन्छ’ फिचर . कला / साहित्य३ जेठ २०७७
काेराेना लाइभका हात हल्लाउनेहरू अहिले नेपालमा ४ हजार ७ सय शब्दहरूलाई मात्र साङ्केतीकरण गरिएको छ । त्यसैले साङ्केतीकरण नगरिएका र प्राविधिक शब्दहरूको भाव दर्शाउन समस्या रहेको उनीहरू बताउँछन् फिचर . समाज३ जेठ २०७७
डडेल्धुराका मजदुर भन्छन्ः रोगभन्दा ठूलो भोक हुने रहेछ (फोटो फिचर) सरकारले ११ चैतदेखि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण गर्न सिङ्गो देश नै लकडाउन गरेको छ । लकडाउनले सबैभन्दा बढी मजदुर प्रभावित भएका छन् । लम्बिँदै गरेको लकडाउनले दैनिक कामकाज गरेर खाने मजदुरलाई अहिले भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । फिचर२७ वैशाख २०७७
मिथिलामा बुद्ध प्रभाव ३ वटा पनि धेरै भयो भनेपछि उनले अन्त्यमा एउटा मात्रै देवता छन् भन्छन्, ‘एको हम बहु सामेद अर्थात् माध्यममा मूल देवता ब्रह्म हुन् र उनका हाँगा फैलिएको मात्रै हो’ फिचर . समाज . समाचार२५ वैशाख २०७७
आहा ! टेकु प्रयोगशालाको लोभलाग्दो मनोबल ‘सुरुका केही दिन केही स्टाफलाई परिवारको दबाब पनि आयो । १/२ जना स्टाफ काममा आउनु पनि भएन,’ उनले भनिन्, ‘३–४ दिनपछि परिवारलाई सम्झाएर काममा आउनुभयो । सबैले आ–आफ्नो दायित्व सम्झेर काम गरिरहनुभएको छ । प्रयोगशालामा राति १२ बजेसम्म पनि काम भइरहेको छ’ फिचर . स्वास्थ्य . समाचार२५ वैशाख २०७७
बुद्ध जयन्तीमा पनि सुनसान लुम्बिनी कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन जारी छ । लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र ठप्प छन् । यसबाट पर्यटकीय क्षेत्र समेत अछुतो छैन् । फिचर . समाचार२५ वैशाख २०७७
डा. अम्बेडकरले काठमाडौं आएर भनेका थिए, ‘मार्क्स होइन, बुद्ध सही छन्’ अम्बेडकर प्रश्न गर्छन्, ‘साधनहरूको मूल्य के हो ? कसका साधन अन्ततः श्रेष्ठ तथा स्थायी छन् ? के साम्यवादीले यो भन्न सक्छन् कि आफ्ना मूल्यवान् साध्य प्राप्त गर्न उनीहरूले अन्य मूल्यवान् साधनलाई नष्ट गरेका छैनन् ? उनीहरूले निजी वा व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट गरेका छन्’ फिचर२३ वैशाख २०७७
'कल बुढोले पिट्यो, मर्दहरू बुझ्दै बुझ्दैनन्' अलिकति पर गाउँभरिका जुठाभाँडा थुप्रिएका छन् । जुठाभाँडामा भन्किरहेका झिँगा छेवैमा खेलिरहेका र सुतिरहेका बालबालिकामा छपक्कै बसेका छन् । त्यहीँ नजिकै घाम तापेर बस्ने गर्छन् शरणार्थीहरू । यहाँ केही परिवार भुटानी र केही भारतीयहरू बस्ने गर्छन् फिचर . समाज२२ वैशाख २०७७
जोखिममा पनि कर्ममै छन् नेपाली महिला पत्रकार वीरगञ्ज घर भए पनि विमलालाई बारा, पर्सा र रौतहट तीन जिल्लाको समाचार तयार पार्नुपर्छ । उनी प्रतीक दैनिकका साथै रेडियो वीरगञ्ज र बे्रक एन लिङ्क अनलाइन न्यूज पोर्टलमा पनि काम गर्छिन् । जमाती समूहमा कोरोना देखियो भनेपछि उनलाई निकै डर लाग्यो फिचर . समाज२१ वैशाख २०७७
अनि काेराेना भाइरसमाथि विजयी भएँ ‘कोरोनाको औषधि भनेकै आत्मबल हो,’ कोरोना संक्रमितलाई अंशु भन्छिन्, ‘आफूलाई स्ट्रोङ बनाउनुहोस् । कोरोना सामान्य हो । कोरोना लाग्दैमा मरिँदैन । यसलाई जित्न सकिन्छ’ फिचर . समाचार२१ वैशाख २०७७
जानकी नवमीको अवसरमा दीपावली (फोटो फिचर) जनकपुरधामसहित प्रदेश–२ का विभिन्न जिल्लाको शहरी क्षेत्रमा शुक्रबार राती दीयो बालिएको छ । जानकी नवमीको अवसरमा स्थानीयले घरको मूलद्वारमा दीयो बालेका हुन् । फिचर . समाज२० वैशाख २०७७
कोरोनाको प्रभावलाई उतार्दै मिथिला चित्रकला मिथिला कलाको छुट्टै मौलिकता छ । मानवीय अनुभूतिको यथार्थ रूपचित्र यस शैलीअन्तर्गत पर्छ । प्रतीकात्मक र साङ्केतिक बिम्बहरूको समष्टि मिलन रेखाबाट यस लोककलाले पौराणिक कथावस्तुका रोचक घटनावलीलाई पछ्याएर प्रस्तुत गर्ने गर्छ फिचर . कला / साहित्य१३ वैशाख २०७७
सरकार सञ्चालन गर्न मनमोहनबाट सिक्नुपर्छ : मोदनाथ प्रश्रित नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुन्, मनमोहन अधिकारी । अधिकारी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा २००८ सालमा पुष्पलाललाई हटाएर महासचिव बनेका थिए फिचर१३ वैशाख २०७७
बीबीएस पूरा गरेकी लजिना सरकारी गाडी हुइँक्याउँदै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरू योग्यता, क्षमता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कतिले नाम नै निकालेपछि बढुवा हुन्छन् । सचिव, मुख्यसचिवसम्म पनि पुग्छन् । तर, सवारी चालक जति वर्ष काम गरे पनि चालक नै हुन्छ फिचर१३ वैशाख २०७७